बैदेशिक रोजगार – Sudur Sanchar
कोरियाले यसरी लुट्यो अर्जुनको सपना, ज्यानै मेशिनले निल्न खोज्दा यसरी बाँच्न सफल भए
सोल, दक्षिण कोरिया — नुवाकोटका अर्जुन तामाङ कोरिया उड्नुअघि अनेक सपना बुन्दै थिए । सहरमा घर, सुखी परिवार । आफन्त साथीभाइबीच राम्रो आर्थिक हैसियत । त्यसबेला उनको तरकारी पसल थियो । तर राम्रो लगानी थप्न नसकेर पसल चलेन । उनी डान्स पनि गर्थे । साथीभाइ मिलेर खोलेको डान्स सेन्टर थियो । केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय पनि गरेका थिए । उनलाई लागेको थियो, कोरियाको कमाइले कला क्षेत्रमा अगाडि बढ्न थप प्रोत्साहन हुनेछ । कोरियामा किम्ची (बन्दाको अचार) र काग्थुगी (मुलाको अचार) बनाउने कम्पनी रहेछ । ठूलो ट्रकबाट बन्दाकोपी र मुला अनलोड गरेर सफा गर्नु उनको दैनिकी थियो । काम गा’ह्रो थियो । ओभरटाइम पनि नहुने । नराम्रो कम्पनी परेपछि राम्रो पैसा कमाउने कुरै भएन ।उनीसँगै पुगेका दुई नेपाली कोरिया आएको एक हप्तामै अर्को कम्पनीमा सरे । उनी चाहिँ ए’क्लिए । कोरियाली भाषामा उनी पोख्त थिएनन् । भाषा नजाने
मलेसियामा सडक पार गर्ने क्रममा एक नेपालीको मृत्युु ! हार्दिक श्रद्धाञ्जली
Posted in बैदेशिक रोजगार, समाचार
मलेसियामा सडक पार गर्ने क्रममा एक नेपालीको मृत्युु ! हार्दिक श्रद्धाञ्जली क्वालालम्पुर, मलेसिया : सोमबार सुबाङ विमानस्थल को सडक पार गर्ने क्रममा कारको ठक्करबाट एक नेपाली को मृत्यु भएको छ । घटना बिहान ८ः३६ बजे भएको र दुर्घ-टनामा ३३ वर्षीय पुरुषको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख पेतालिङजयाका सहायक आयुक्त मोहम्मद फख-रुद्दिन अब्दुल हमिदले जानकारी दिए । जालान लपाङ्गन तेरबाङ सुबाङ विमानस्थलतर्फ जाँदै गरेको भयानक दुर्घ-टनामा पैदलयात्री र कार ठो-क्किए । “प्रारम्भिक अनुस-न्धानले पी-डित नेपाली नागरिक भएको पाइएको छ र क्रस गर्दा उल्लङ्घन गरिएको थियो र घटनास्थलमै मृत्यु भयो,” उनले मंगलबार एक विज्ञप्तिमा भने। उनले मृत-कको श-व पोस्ट-मार्टमका लागि युनिभर्सिटी अफ मलाया मेडिकल सेन्टर (UMMC) लगिएको बताए । मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन थप अनु’सन्धान भइरहेको उनले बताए ।
डि भि परेर अमेरिका गएका भरत अब कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताए !!
अलबिदा भतिज भरत ओली । यो दु:खद खबरले स्तब्ध छु । केहि दिन अघि हाम्रो कुरा भएको थियो । सबै ठिकठाकै थियो तर अकस्मात नि’धनको खबरले म’र्माहत बनायो । जिन्दगी भन्नु नै के रहेछ र ? थाहा छैन कुन दिन कुन रात अन्तिम हुने हो । विश्वास लागेन र अमेरिका फोन गरें, उसको साथीले हो नि’धन भयो भन्यो। अचम्म लाग्यो अझै विश्वास गर्न सकि रहेको छैन । भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली भतिज ! दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना । – अमेरिका मा नि’धन भएका भरत ओली लाई सम्झिदै उनका अंकल ले लेखेको यो भावुक फेसबुक स्टाटस यो पनि – कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ फेरि अस्पताल भर्ना भएका छन्। अचानक उनको मुटुमा समस्या आएपछि उनलाई शनिबार बिहान काठमाडौंको गंगालाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनलाई शुक्रबार राति देखि छाती दुखेको थियो। मदनकृष्णमा कोरोना भाइरसक
कुवेतमा क्रेनको ठक्करबाट एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु। कुवेतको मङ्गाफमा गत शुक्रबार क्रेनको ठक्करबाट एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोककि माया तामाङको बाटो काट्ने क्रममा विपरित दिशाबाट आएको क्रेनले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमा नै मृ’त्यु भएको थियो। गत शुक्रबार १४ तारिकका दिन दिउँसो करिब १ बजेको समयमा घटेको घ’टनालाइ कुवेत प्रहरिले मुचुल्का बनाउनुका साथै क्रेन चालकलाइ नि’यन्त्रणमा लिइएको छ भने श’वलाइ पो’स्टमार्टमका लागि हस्पिटल लगिएको बुझिएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मृ’तक तामाङले बाटो काट्ने क्रममा मोबाइल चलाउँदै बाटो काटिरहेको बेला सो घट’ना भएको बताएका छन। यश बिसयमा नेपाली दूतावासमा जानकारी गराइसकेको NRNA कुवेतका युवा संयोजक नबराज पराजुलिले जानकारी दिएका छन।
साउदीमा ६० नेपाली युवाको गुना’सो- सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा पाएनौँ
साउदीमा ६० नेपाली युवाको गुनासो- सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा पाएनौँ दोहा– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको सोच हुन्छ, टन्न पैसा कमाउने र सुखी जीवन जिउने । आमा बुबाको सपना पूरा गरी परिवार सदस्यलाई खुसी बनाउने । यही अभिप्राय: बोकेर विदेशिएको युवाले दिनरात नभनी विदेशी भूमीमा दु:ख गर्छ । बेरोजगारीको पी'डा सहन नसकी भएको पैसा लगानी गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाको विदेशी भूमीमा पुगेपछि सपनामा ठेस लाग्न थाल्छ । मेनपावर कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसारको काम हुँदैन । काम भएपनि सम्झौता अनुसारको तलब तथा सेवा सुविधा पाइँदैन । अहिले यही समस्यामा रुमलिएका छन् साउदी पुगेका ६० नेपाली युवा । नेपालमा सम्झौता गरिए अनुसारको तलव सुविधा नपा'एपछि उनीहरु समस्यामा छन् । विगत ५ महिनाअघि मात्र काठमाडौँको ह्युमर ओभरसिजमार्फत साउदी पुगेका उनीहरुले सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा नभएको भन्दै गु
काठमाडौँ, महामारीको समयमा चार्टर फ्लाइटमा घोटला गर्नेलाई छानबिन गर्न मन्त्री आलेको ठाडो निर्देशन दिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोरोना महामारीको समयमा खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको हबाइ उद्धार गर्न गरिएको चार्टर फ्लाइटमा भएको अनिमियताका विषयमा आज एक छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईंटेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यमा मन्त्रालयका उपसचिव टेकनारायण पौडेल तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर रहेका छन् । आजै गठन भएको उक्त समितिले शुक्रबारदेखि आफ्नो कामको थालनी गर्ने संयोजक लुईंटेलले बताएका छन् । उक्त समितिलाई १० दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न समय तोकिएको छ ।
Jan132022 by Bibek PoudelNo Comments
काठमाडौँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेको खुलेको छ । आउँदो महिनादेखि सञ्चालन हुने भिसा सेन्टर श्रममन्त्री श्रेष्ठले गत बिहीबार उद्घाटन गरेका हुन् । यूएई सरकारले नेपालमा कुन उद्देश्यका लागि भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो भन्नेबारे औपचारिक सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छैन । यूएई सरकारले आवुधाबीस्थित नेपाली दूतावासलाई समेत यसबारे औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । बाहिर भिसा सेन्टर स्थापना गर्दा नेपाल सरकारबाट सहमति चाहिने भएकाले यूएईले लाजिम्पाटस्थित दूतावास परिसरबाटै भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो । सेन्टरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि यूएई जाने नेपालीको आंैठा छाप लिने, स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि दूतावासबाटै भिसा जारी गर्ने तयारी छ । सेन्टरबाट जारी हुने भिसा यूएई प्रवेशका लागि मात्
छोराले विदेशमा राम्रो काम नपा’एपछि बुवाले गो’ली हा’नी ‘एजेन्ट’को ह’त्या गरे (सहि कि गलत )
छोराले विदेशमा राम्रो काम न'पाएपछि उनका बुवाले वैदे'शिक रोजगारीमा पठाउ'ने ‘एजेन्ट’लाई योज'ना बनाएरै गो'ली हानी ह'त्या गरेका छन्। कपिलवस्तु कृष्णनगर नगरपालिका-१० का ५५ वर्षीय पारस पुरीलाई गो'ली हानी ह'त्या गरेको आ'रोपमा प्रहरीले एक जनालाई प'क्राउ गरेको छ। विजयन'गर गाउँपालिका-१ का ५० वर्षीय पशुपति कुर्मीलाई प्रहरीले पक्रा'उ गरेको हो। उनलाई कपिलवस्तु नगरपालिका-१० नेपाल-भारत सिमाबाट प'क्राउ गरिए'को प्र'हरी नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले बताए। २०७५ साल चैत १७ गते राति साढे ९ बजे पुरीको गो'ली हा'नी ह'त्या गरिएको थियो। ह'त्यापछि भा'गिरहेका कुर्मीलाई नि'यन्त्रण'मा लिएर सोधपुछ गर्दा आरो'पीको पहिचान खुलेपछि हिरा'सत लिइएको भण्डारीले बताए। पुरी वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरूलाई विदेश पठा"उने कार्यमा संलग्न थिए। कुर्मीका छोरालाई विदेश पठा'इदिने भनेर पुरीले १ लाख १५ हजार रूपैयाँ लिएका थिए।
मलेसिया : मलेशिया नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मध्ये एक हो । रोजगारीकै लागी लाखौँ नेपाली मलेशिया आउने जाने गरिरहन्छन् । रोजगारीको लागी मलेसिया पुगेका केहि नेपाली भने परिवारको सम्पर्कबाट टाढा हुने गरेको विभिन्न घ’टना क्रम र अध्ययनहरुले देखाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मु’द्दामा जे’ल पर्नु, पे्रम सम्बन्ध, पारिवारिक म’नमुटाव, रोजगारीकै क्रममा विदेशमा मृ’त्यु, दु’र्घट’नामा पर्नु, घरेलु कामदारको हकमा रोजगारदाताले ब’न्दी बनाउनु, व्यक्तिगत चाहनालगायत कारणबाट विदेशिएका नेपाली परिवारको सम्पर्कमा नआएका बुझिएको छ । आप्रवासी कामदारको हक, अधिकारको क्षेत्रमा क्रि’याशील प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) मा पछिल्लो ६ वर्षको अव’धिमा परेको उजु’रीअनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा पुगेकामध्ये २०० नेपाली परिवारको सम्पर्क बाहिर छन् । यो त उजु’री परेकाको म
कतार एयरवेजले भाडामा २५% छुट दिने, नेपालीले यसरी फाइदा लिनुहोस ।
जनवरी ११, दोहा : कतार एयरवेजले उडान टिकटहरूमा २५ प्रतिशतसम्मको ठूलो बचत प्रदान गर्दै दोहामा यात्रुहरूका लागि ग्लोबल सेल्स अभियान सुरु गरेर आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। यो आज जनवरी १० देखि सुरु हुने सात दिने अभियान अवधिका लागि सिट छनोट, अतिरिक्त सामान भत्ता, होटल बुकिङ र कार भाडामा विशेष बचतको अतिरिक्त हो। नामांकन प्रोमो कोड FLYQR22 प्रयोग गरी एयरलाइनको पुरस्कार-विजेता लोयल्टी कार्यक्रम, प्रिभिलेज क्लबमासामेल हुने यात्रुहरूले यसको वार्षिकोत्सवको अवसरमा थप 2,500 बोनस Qmiles तुरुन्तै कमाउनेछन्। यात्रुहरूले कतार एयरवेजको अवार्ड-विजेता सेवाहरू अनुभव गर्न र एसिया, युरोप, मध्यपूर्व र अमेरिकाका १४० भन्दा बढी गन्तव्यहरूको विस्तारित नेटवर्कमा २५ प्रतिशतसम्मको बचतका साथ व्यापार र इकोनोमी क्लासमा ग्यारेन्टी लचिलोपनका साथ विशेष प्रवर्द्धन प्रयोग गर्न सक्छन्। ग्लोबल सेल 25 औं वार्ष